Ireo fitambarana sakafo mahasalama
Persily : Mampitony ny fanaintainan’ny fadimbolana
Hanitra fanao amin’ny sakafo no tena mahavantana antsika rehefa miresaka persily. Rariny tokoa satria azo hitaizam-batana hisorohana aretina na hampitoniana fanaintainana ity zava-maitso ity. Ohatra ireto omena anao ireto.
Papay manta : Mampitony aretim-bavony
Tsy ao anatin’ny papay masaka ihany no ahitana ireo voka-tsoa ho an’ny vatana fa eo ihany koa ny manta. Atao lasary, afangaro amin’ny hena sns maro ireo fomba fikarakara azy higohana ireo voka-tsoa ireo.
Voanjo : manatsara ny fo sy lalan-drà
Karazana « legumineuse » mitondra voka-tsoa maro ho an’ny vatana ny voanjo. Rehefa mangatsiaka tahaka izao, ho antsika malagasy matetika no tena mandeha ny tsenan’ny voanjo satria be menaka manafana. Ireto ny voka-tsoa entin’io sakafo io.
Mitsabo sy mampihena tena amin’ny atody!
Voaresaka matetika tato ho ato ny atodina papelika, izay malaza ho manasitrana aretina maro. Mitondra voka-tsoa maro tokoa mantsy ny atodin’ity vorona ity, saingy tsara ho fantatra kosa fa misy fatrany izany arakaraky ny aretina sy ny filàna.
Ronono « amande » : manemotra ny fipoiran’ny « Alzheimer »
Tsy tena mahavantana ny olona rehetra kanefa mahasalama ny vatana ny ronono “amande”. Azo avy amin’ny fikirakiràna ny voan’ity akora ity io ronono io. Ireto ny voka-tsoa entiny.
Minana saribao : Mampandevon-kanina
Tsy ao an-dakozia ihany no azo ampiasana ny saribao, fa azo entina mikolo ny hatsaràna sy ny fahasalamana ihany koa izy.
Manadio ny aty amin’ny baranjely
Legioma manana ny maha-izy azy ny baranjely saingy an-kavitsiana no mazoto migoka tanteraka ny voka-tsoa entiny.
Akondro sy sôkôlà, kafe sy tantely sns mitombo avo roa heny ny voka-tsoa entin’ny sakafo roa mitambatra. Ireto manaraka ireto izao dia azonao atao any an-trano sady mampiakatra hery fiarovana amin’izao andro ririnina izao.
Ronono + akondro : be kalsiôma
Manasitrana vavony ny akondro, mitondra “inuline”, fibra tsara ho an’ny taovam-pandevonan-kanina izy. Manamora ny fitrohan’ny vatana ny kalsiôma ihany koa ny akondro. Mba higohana izany, hano miaraka amin’ny sakafo mitondra kalsiôma maro ny akondro toy ny ronono, fraomazy, “broccoli”, laisoa sns. Atao “crêpe” na ampiarahana amin’ny varim-bazaha na atao “smoothie”.
Brocoli + moutarde : mamono sela mivadika homamiadana
Manan-karena singa antsoina hoe « sulforaphane » ny « brocoli ». Io singa io izay malaza mamono ny sela ahiana hivadika homamiadana. Ny olana anefa rehefa handrahoina ity legioma ity dia very io “sulforaphane” io. Ampifangaroy amina sakafo hafa afaka mitazona io singa io, araka izany, ny broccoli, ohatra hoe : ny “moutarde” na sakafo manta ao anatin’ny fianakavian’ny “crucifère”.
Kafe + tantely : mampamokatra kokoa
Mampamokatra kokoa ny misotro kafe sy tantely miaraka. Mora miasa sy mandray kokoa ny ati-doha mantsy. Atao solon-tsiramamy fotsiny ilay tantely eto.
Tongolo be + mofo dipaina : mampiakatra hery fiarovana
Mampiakatra hery fiarovana voajanahary ao anaty ny tongolo be sy mofo dipaina mitambatra. Sady sakafo “antiseptique” mantsy ilay tongolo be ka manala ireo virosy ihany koa.